အဆိုပါ Marvelမော်ကွန်းတိုက်များ - Brick Fanatics
19 / 10 / 2021 19 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 208 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ထာဝရက Black Panther Wakanda, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego 2022, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ရုပ်ရှင်တွေ, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Marvels, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး
24 / 09 / 2021 24 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 266 Views စာ0မှတ်ချက် 10759 Elastigirl ရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်လိုက်စား, 76076 ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်ဂျက်လိုက်စား, Disney+, Hawkeye, ကိတ်ဆရာတော်, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, အသေးစား, Ms Marvel, ဒေါ်။ Marvel, streaming များ, အဆိုပါ Marvels
20 / 09 / 2021 21 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 471 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, ထာဝရက Black Panther Wakanda, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego 2022, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Marvels, Thor ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိုးကြိုး
21 / 08 / 2021 21 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 262 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, ကပ္ပတိန် Marvel, သံမဏိလူသား, သံမဏိart, ကီဗင် Feige, Lego, Lego Marvel, Marvel, အသေးစား, မော်နီကာရက်ဘို, အဆိုပါ Marvels, တိုနီ Stark
21 / 08 / 2021 21 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 423 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Agatha Harkness, ကပ္ပတိန် Marvel, ကပ္ပတိန် Marvel 2, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အသေးစား, မော်နီကာ, မော်နီကာရက်ဘို, ဦး ခေါင်းခွံ, superhero, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, WandaVision
18 / 08 / 2021 01 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 982 Views စာ0မှတ်ချက် 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, 76021 Milano အာကာသယာဉ်အားကယ်ဆယ်ရေး, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, 76237 Sanctuary II ကို, မိကျောင်း Loki, Black က Panther, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, City, Clone Trooper ဖြစ်သည်, ကော်ဖီခွက်, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, အီစတာကွကျဥ, ဖါး, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, ရဟတ်ယာဉ်, Lady Loki, Lego, Lego CIty, LEGO CMFs များ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Lego Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Minecraft, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Minecraft, အသေးစား, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews, ဆမ် Wilson, Spider-Man, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, streaming များ, superhero, Superheros တွေက, ဓားကို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, Throg, အချိန်ကှဲလှဲအာဏာပိုင်, T'Challa စတား - Lord, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, ဝမ် Maximoff, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
03 / 05 / 2021 03 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 918 Views စာ0မှတ်ချက် ပုရွက်ဆိတ်-Man, ပုရွက်ဆိတ်-Man နှင့် WASP, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ထာဝရက Black Panther Wakanda, နိစ္စထာဝရ, ရုပ်ရှင်, Lego, Lego Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, ရုပ်ရှင်တွေ, ထာဝရ, အဆိုပါ Marvels, အဆိုပါ WASP, Thor, Thor ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိုးကြိုး